Fitandroana ny fandriam-pahalemana: Basy sy bala natolotra ho an’ny Ministeran’ny Fitsarana
Tontosa androany hariva teny amin’ny Toby Ratsimandrava ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy fitaovam-piadiana avy amin’ny Sekreteram-panjakana­ miadidy ny Zandarimariam-pirene­na (SEG) ho an’ny Ministeran’ny Fitsarana, sy ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka.
Araka ny baiko sy toromarika avy amin’ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara Atoa Andry Rajoelina, dia miara-misalahy ireo mpisehatra rehetra amin’ny fandriam-pahalemana.­
Ho fifanampiana, dia natolotra androany ho an’ny Ministeran’ny Fitsarana ireo basy ( D 7,5 mm – modèle 1936 type MAS – Manufacture d’armes de Saint-Etienne) sy bala maro miaraka aminy (balles ordinaires- modèle 29C). Ho an’ny Mpandraharahan’ny fonja avokoa ireo.
Natolotra ho an’ny Ministeran’ny Filaminam-bahoaka kosa ireo ambina basy sy bala, samy mitovy marika sy modely avokoa amin’iretsy voalaza etsy ambony. Marihina fa basy sy bala samy manana ny laharany mazava tsara tsirairay avy avokoa ireo.
Nanatrika ny fanolorana ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka (MSP), ny Jeneraly, Sekreteram-panjakana­ miadidy ny Zandarimariam-pirene­na (SEG) ary ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjaka­na Minisitry ny Fitsarana (GSMJ), notronin’ireo manam-boninahitra sy sivily tompon’andraikitra isan-tsokajiny amin’ireo Ministera tsirairay avy.
Mbola mety hisy ny fanomezana hafa amin’ny manaraka hoy ny SEG.
← Tetikasa fanamafisana ny tany tan-dalàna : Fampitaovana mitentina 200.000 $ natolotry ny PNUD
Fotoam-pitsarana manetriketrika fametrahana ny Filohan’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany (TPI) Toamasina →